Nabadgelyada Kumbuyuutarka - 8 Hababka looga hortago weerarrada injineeriyadda
Machadka Bulshada ee qaabkiisa asaasiga ah waa khabiir ku takhasusay in lagu dhaqmo isticmaalaha kombuyuutarka oo ka baxsan magacooda iyo lambarka sirta ah. Mashruuca bulshada wuxuu ka baxsan yahay macaamilka iyo lambarka sirta ah. Weerar farsamo oo wanaagsan oo qorshaysan ayaa burburin kara shirkadaha. Dhamaan warbixinnada ugu xun ee tuugada ayaa isticmaalay nooc ka mid ah weerarka injineernimada. Injineerada bulshada ayaa waxtar badan leh sababtoo ah kombuyuutarrada kumbuyuutarrada iyo khabiirada amniga waxay ku qaataan dhammaan waqtigooda nidaamyada mashiinka ah oo aysan tababarin shaqaalaha shaqaalaha macluumaadka ammaanka Nabadgelyada macluumaadka ayaa ka baxsan kombuyuutarro kumbuyuutar ah, waa isku xirnaanta amniga jirka, siyaasadda kombiyuutarka / shabakada iyo tababarka shaqaalaha.
Qodobkani wuxuu sharaxayaa qaar badan oo ka mid ah khaladaadka amniga guud ee ah in tuugada macluumaadka ka faa'iidaystaan ​​iyo sida aad uga hortagi karto.
1. Macluumaadka bogagga
Website-yada shirkadaha ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu bilaabi karo marka la ururinayo macluumaadka. Badanaa shirkad waxay soo diri doontaa dhammaan shaqaalaheeda magacyada, cinwaanada emailka, jagooyinka iyo lambarrada telefoonka ee qof walba inuu arko. Waxaad dooneysaa inaad xadido tirada shaqaalaha iyo lambarrada taleefanka ku qoran bogga internetka. Sidoo kale, xiriirada firfircoon ee noolaanshaha cinwaannada emailka shaqaalaha waa in laga fogaadaa. Khalad caadi ah waa shirkadda emailka ee shirkadda waxay noqon doontaa mid la mid ah shabakadooda, tusaale ahaan cinwaanka emailka [Email ilaaliyo] wuxuu leeyahay magaca isticmaalaha jsmith ee shabakadda oo leh lambar isku mid ah email iyo shabakad.
2. Xakamaynta Wicitaanka
Qofka ku garaacaya telefoonka waa mid aad u fudud. Shaqaalaha shirkadu waxay u baahan yihiin in loo tababaro inay noqdaan kuwo naxariis badan laakiin taxaddar leh marka la siinayo wicitaanada macluumaadka taleefanka. Mid ka mid ah hanjabaad hacking waa hacker uu soo wici doono shirkad ka dhigaysa iibiye kombiyuutar. Ganacsatada ayaa weydiin doona xoghayaha nooca kombiyuutarka ee ay leeyihiin, ma leeyihiin shabakad siman iyo nooca nidaamyada hawlgalka ee ay wadaan. Hackers waxay isticmaali karaan macluumaadkan si ay u qorsheeyaan weerarkooda shabakadda. Tababar shaqaalahaaga si aad ugu gudbiso wixii su'aalo ah ee la xiriira IT-ga Taageerada Tech.
3. Qandaraaslayaasha Dibadda
Qandaraasleyda ka baxsan waa inay leeyihiin xiriiriye ammaan si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqooda. Xiriiriyeyaasha amniga waa in lagu faahfaahiyaa wixii shaqo ee qandaraaslaha loo kiraysto si loo fuliyo, aagagga hawlgalka, aqoonsiga qandaraaslaha iyo haddii qandaraaslaha uu ka saari doono alaabta goobta shaqada.
4. Quusitaanka Qashin-qubka
Habka ugu fudud ee lagu heli karo macluumaadka qof walba waa in la mariyo qashinka. Qalalaasaha waa in loo adeegsadaa xaaladaha oo idil ama adeega sheyga waa in la kiraystaa. Sidoo kale, Dumpster waa inuu ku jiraa meel amaan ah iyo ilaalin.
Waxay yihiin khadka ugu horeeya ee difaaca, iyaga ku tababar si aan cidna u gelin dhismahaaga ilaa ay ka mid yihiin kuwa ay yihiin. Kaamirooyinka amniga waa in lagu dhejiyaa waddada weyn ee laga soo galo iyo sidoo kale dhismaha dibedda. Qof tuug ah oo tijaabinaya shabakadaada ayaa tijaabin doona in lagu arko haddii uu ka soo horjeedo dhismaha, kamaradaha ayaa kaa caawin kara aqoonsashada astaamaha iyo dadka laga shakiyo.
Samee siyaasad shirkadeed in waaxda tiknoolajigu aysan waligaa kugu soo wicin ama email aad weydiisato magacaaga ama lambarkaaga sirta ah. Haddii qofku waco oo uu weydiiyo sir ah ama magaca isticmaale calanka gaduudan wuxuu tagi doonaa meel kasta.
7. KA BAX
Weerarada sayniska ee sayniska ayaa kambuutarka ku geynaya dhismaha oo waxay badanaaba ka heli doonaan goobo shaqo oo badan oo aan cidi isticmaalin. Samee siyaasad shirkadeed in dhammaan dadka isticmaala ay waajib ku tahay inay gashadaan goobahooda shaqadooda mar kasta oo ay ka tagaan. Haddii siyaasadda aan la raacin, waa in qofka shaqaalaha ah la qoro ama uu bixiyo mushahar. Ha ka dhigin shaqo jaban oo shaqo ka fudud intii hore.
Tababbarka badbaadada macluumaadka waa shuruud u ah shirkad kasta oo weyn. Ammaanka warfaafintu waa hab loo qaabeeyey oo ka bilaabma dhismaha qaab dhismeedka dhismaha oo hoos u dhigo sida saldhig kasta oo loo qaabeeyo. Qodobo badan oo qorshaha amnigaaga ah ayaa sii adkaanaya inuu yahay tuugo macluumaad ah si uu u guto waajibkiisa.